HTTP mamiriro macode, chii? | Linux Addicts
Linux Vakapindwa muropa | 23/11/2021 12:35 | Resources
Nhasi makambani anoda solutions uye hapana matambudziko. Iyo yedhijitari yepakati yave mukana webhizinesi kune vamwe, asiwo nyaya yakamirira kune vamwe. Makambani mazhinji ane hunyanzvi mune rimwe rudzi rwebasa, umo vanomira kunze kwevamwe. Zvisinei, kuvapo kwake paIndaneti zvinopikisana nemashoko aya. Isu tinotaura nezvemakambani ne mapeji ewebhu asina kunyatsojeka, asina kuchinjirwa kumafomati enharembozha kana neasina kunaka injini yekutsvaga. Pakazara chiitiko chakashata chemushandisi.
1 Ndeapi mastatus codes?
1.1 5XX Zvikanganiso
1.2 4XX Zvikanganiso
2 Maitiro ekunetsa 4xx uye 5xx zvikanganiso
3 Maitiro ekugadzirisa 404 kukanganisa peji
Ndezvipi kodhi yemamiriro?
Kuti unzwisise zviri kunze kwewebhu peji, zvakakosha kuziva kuti inoshanda sei. Kana zvasvika pakugadzira webhusaiti yakakwana, ese maficha ekugadzirwa kwayo uye zvekunze zvinopesvedzera zvese, kureva kuti vashandisi vakawana sei. Kudzidza maitiro emushandisi zvakadzama, macode emamiriro anogona kubatsira zvakanyanya.
Tiri kutaura pamusoro penhevedzano yekodhi uye nhamba dzinoratidza mamiriro akasiyana, anozivikanwawo se chinzvimbo. Izvi zvinoreva kuti tinogona kuziva kuti bhurawuza redu riri papi kana kuti bhurawuza remushandisi riri pawebhusaiti yedu. Semuenzaniso, isu tinogona kuona kana iwe uri online kana kana kubatana kwako kuchipindirana nekuda kwechimwe chikonzero. Kuvandudzwa muchikamu kuri kuita kuti zvikwanise kuziva zvakawanda uye zvakanyanya nenzira inobvumirana nezvekubatana uye kutaurirana kwevashandisi newebhu.
Izvi zvinopa ruzivo rwakakosha kune UX kana Nhoroondo yevashandi, sainzi itsva inodzidza manzwiro nemafungiro ayo vashandisi vanawo pavanenge vachidyidzana nechinhu, mune iyi nyaya webhu. Kana iyi webhusaiti iine nguva yakawandisa yekuremerwa, zvingangoita kuti zvibodzwa maererano neruzivo rwemushandisi zvichadzikira.
Ngationei kuti ndeapi marudzi emakodhi atingawana:
Kune rumwe rutivi, kune makodhi anotanga ne5, ayo anoreva kukundikana nevhavha, kureva, mupi wekubatanidza uye chimiro chewebhu. Muchikamu ichi tinowanawo zvakasiyana-siyana. Kutanga, iyo 500 kodhi inoreva mamiriro ezvinhu asingatarisirwi anotadzisa murairo kuti uitwe, ukuwo 501 inokwezva kune kushanda kusingaenderane nesevha paunenge uchigadzirisa chikumbiro. Sezvatinofamba nemhando idzi dzenhamba, tinowana iyo kukanganisa 502, zvakajairika zvakare. Izvi zvinechekuita nemhinduro isiriyo kubva kune server inoshanda segedhi. Aya marudzi enyaya dzehunyanzvi ari nyore kune nyanzvi yekombuta kugadzirisa. Izvo zvakare zvakanyanya kwazvo 503 uye 504 zvikanganiso, ine zvishandiso zvakasiyana kwazvo.
Zvadaro tine zvikanganiso-matatu-matatu anotanga na4, ayo anowanzobatanidzwa nekukanganisa kwakaitwa nemushandisi, kureva, mutengi achitsvaga peji yewebhu mubvunzo. Yekutanga ndeimwe yeakajairika uye inozivikanwa neiyo nhamba 400. Ndiko kufona chikumbiro chakaipa, iyo inoreva chikumbiro icho sevha yatadza kududzira, nekuda kwekushata kwemazwi. Zvakare chikumbiro ichi chinogona kunge chisina kubvumidzwa, sezviri mu kukanganisa 401. Izvi zvinoreva zviitiko apo mhinduro inoda kuti mushandisi azviratidze ega. Munzvimbo ino tinowana zviitiko umo mushandisi haakwanise kupa kusimbiswa kwakadaro. Zvakare sevha inogona kuramba kubvuma chikumbiro, semu kukanganisa 403. Chimwe chikonzero chingava 405, iyo inotaura kuti nzira yekukumbira yakashandiswa haishande. Chikumbiro ichi chinogona zvakare kukanzurwa kana mushandisi kana timu yavo ikatora nguva yakareba kuti iite zviri pamutemo, semu kukanganisa 408.
Iyo 404 Haina Kuwanikwa kukanganisa Ndiyo imwe yezvikanganiso zvakajairika zvinowanikwa painternet uye inoreva kutsvaga iyo server isina mhinduro. Zvingangove kuti peji ratiri kutsvaga haripo, rakanyorwa zvakaipa kana kuti kutsvaga kwedu kwakanyanyisa. Tichaongorora kukanganisa uku muchikamu chinotevera.
Maitiro ekunetsa 4xx uye 5xx zvikanganiso
Kuve nedhipatimendi mukati mechikwata kunogona kunetsa, kunyanya kana iri yemakambani madiki ane bhizinesi risina musimboti waro online. Nekudaro, zvinodikanwa kugara uchiongorora ecommerce uye mapeji ewebhu zvikanganiso zvinokonzeresa indexing uye UX matambudziko pane peji.
Kugadzirisa 5xx zvikanganiso, zvinokurudzirwa kuita ongororo yelogi kuti uwane rumwe ruzivo rwekuti nei vari kugadzirwa. Nguva zhinji, zvikanganiso izvi zvinomuka semhedzisiro yekumisikidzwa kwakashata kweseva kana, kunyangwe, semhedzisiro yeimwe shanduko yekupedzisira yewebhu yakaitwa (senge yakashata plugin update kana shanduko yeimwe mashandiro epeji).
4xx kukanganisa Anonyanya kuzivikanwa ndee404s uye, pane dzimwe nguva, anogona kukonzerwa nemaitiro ane musoro kana zvirimo zvadzimwa pawebhu izvo zvisingadzoke. Nekudaro, zvakajairika kuwana zvirimo zvakafanana neiyo yakabviswa pane peji, iyo inotungamira vashandisi kuti vafambise kufamba. Saka, mumamiriro ezvinhu akadai, zvakakosha kutungamirira kuburikidza ne.htaccess.
Muzviitiko zviviri izvi, kuburikidza nekushandiswa kwe web zvinokambaira maturusi inoteedzera mawonero anoita Google peji uye chii chinoivhara kuti iite kudaro, tinogona kuona ma http mamiriro ema URL anoumba chero peji rewebhu. Iri basa rinowanzoitwa nenyanzvi mune SEO kuisa, asi izvo zvichagadzirisa nehunyanzvi iyo IT team kana kambani IT. Uye, kana isu tisina dhipatimendi iri mukati, nhasi zvinogoneka hira mugadziri wewebhu freelance kuongorora hutano hwewebhusaiti uye kugadzirisa zvikanganiso zvinoenderana nehunhu hwavo. Uyewo, iva nekukurukurirana kwemvura ne web hosting provider Izvo zvakakosha kuti ugone kugadzirisa zvimwe zvikanganiso nenzira inononoka, pamwe nekuve wakangwarira chero dambudziko reserver rinogona kukonzera kuwandisa kana kuparara kwewebhu peji.
Maitiro ekugadzirisa 404 kukanganisa peji
La 404 peji rekukanganisa inowanikwa zvakanyanya kupfuura zvinoita pawebhu. Izvi zvinowanzoitika kana imwe tebhu iri kugadzirirwa asi isati yagadzirira. Saka, vashandisi vanogona kudzvanya pane zvinongedzo kana kunyora chaizvo zvikumbiro izvo zvisingatungamirire chero kupi. Imwe nzira yekukwirisa iyi peji yekukanganisa ndeyekuigadzirisa neimwe nzira kuti isaite seyakakura kudaro komputa kukanganisa. Mamwe makambani anotoshandisa IT mhinduro dzinoita kuti peji ino ipe mhinduro.
Isu tinotaura, semuenzaniso, zvezvikamu zvidiki zveQ&A (Mibvunzo neMhinduro) umo nyaya dzinowanzoitika dzakakwanisa kutungamira mushandisi kunzi dijitari limbo dzinotaurwa. Makambani asingagadzirise peji ino yekukanganisa kana kutarisira kukanganisa pachine nguva anogona kutariswa seasingagoneki.
Zvakakosha kuve nenyanzvi dzinogona kuwana yakanakisa shanduro yekambani kana nyanzvi yakazvimirira painternet. Kugadzirisa makodhi eHTTP ndicho chimwe chezvikonzero nei masevhisi ako akakosha.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » HTTP mamiriro makodhi, chii?
Nyika yeGerman inoenda yakavhurika sosi uye ichashandisa Linux uye LibreOffice, pakati pevamwe